ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် အလုပ်ရုံ ပူသော ရောင်းချခြင်း wholeရောင်းချခြင်း - Wahsun ပလပ်စတစ် ထုတ်ကုန်များ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မိခင် နှင့် ကလေး ထုတ်ကုန် > ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင်
အဆိုပါ ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် ပါဝင်ပါသည် တစ်ဦး 4-In-1 Multi-ရည်ရွယ်ချက် ကုလားထိုင်, တစ်ဦး 3-in-1 Multi-ရည်ရွယ်ချက် ကုလားထိုင်, တစ်ဦး 2-in-1 Multi-ရည်ရွယ်ချက် ကုလားထိုင်, တစ်ဦး ထမင်းစားခန်း ကုလားထိုင် - တစ်ဦး အဖျားခတ် ကုလားထိုင် - တစ်ဦး လွယ်ကူသော ကုလားထိုင်. အဆိုပါ ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် ဖြစ် mတစ်ဦးde ၏ အစာ grတစ်ဦးde plတစ်ဦးstic တစ်ဦးnd ဖြစ် mတစ်ဦးde ၏ Eco-friendly leတစ်ဦးther. အဆိုပါ durတစ်ဦးble အတွင်းဖြစ်သော cတစ်ဦးn ဖြစ် eတစ်ဦးsily သုတ် cleတစ်ဦးn နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်။
2 တွင် 1 ဘက်စုံသုံး ကုလားထိုင်, dတွင်nတွင်g ကုလားထိုင် - လေ့လာချက် စားပှဲ & ကုလားထိုင်. Y က-ပုံ ကာကွယ်မှု လုံခွုံသော ခါးပတ်။ ကြာရှည်ခံသော ကူရှင်ချုပ် နိုင် အလွယ်တကူ ဖြစ် သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်။
ကလေး မြင့်သော ထမင်းစားခန်း ကုလားထိုင်, 3-in-1 Multi-ရည်ရွယ်ချက် ကုလားထိုင်, ထမင်းစားခန်း ကုလားထိုင် - အဖျားခတ် ကုလားထိုင် - လွယ်ကူသော ကုလားထိုင်. 3-မြန်နှုန်း ခွေနငျးခလုပျ အမြင့် ညှိနှိုင်းမှု, 2-မြန်နှုန်း pတစ်ဦးllet ညှိနှိုင်းမှု, ငါ-ပုံ လုံခွုံမှု ခါးပတ်။ အဆိုပါ ကလေး မြင့်သော ထမင်းစားခန်း ကုလားထိုင် ဖြစ် လုပ် ၏ အစာ တန်း ပလပ်စတစ်, လုပ် ၏ Eco-friendly သားရေ, နှင့် အဆိုပါ ကြာရှည်ခံသော အတွင်းဖြစ်သော နိုင် ဖြစ် အလွယ်တကူ သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်။
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-D ကို 5-ရာထူး လျောင်း ထိုင်ခုံ ဘို့ bတစ်ဦးckrest, 7-ရာထူး ဘို့ အထွဋ်, 3-ရာထူး သင့်အောင်လုပ်ခြင်း ဘို့ footrest, 3-ရာထူး ဘို့ နှစ်ဆ ဗန်း, 5-အမှတ် လုံခွုံမှု ခါးပတ်။ ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် dinning ရှိပါတယ် နှစ် ဗန်း, တစ် ဘို့ နို့တိုက်ကျွေးရေး, တစ် ဘို့ ကစား။ ကြာရှည်ခံသော ကူရှင်ချုပ် နိုင် အလွယ်တကူ ဖြစ် သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်, တစ် ကြယ်သီး နိုင် ခေါက်, eတစ်ဦးsy သို့ operတစ်ဦးte.
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-C, 5-ရာထူး လျောင်း ထိုင်ခုံ ဘို့ bတစ်ဦးckrest, 7-ရာထူး ဘို့ အထွဋ်, 3-ရာထူး သင့်အောင်လုပ်ခြင်း ဘို့ footrest, 3-ရာထူး ဘို့ နှစ်ဆ ဗန်း, 5-အမှတ် လုံခွုံမှု ခါးပတ်။ ကလေး မြင့်သော dinning ကုလားထိုင် ရှိပါတယ် နှစ် ဗန်း, တစ် ဘို့ နို့တိုက်ကျွေးရေး, တစ် ဘို့ ကစား။ ကလေး မြင့်သော dinning ကုလားထိုင် ကြာရှည်ခံသော ကူရှင်ချုပ် နိုင် အလွယ်တကူ ဖြစ် သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်, တစ် ကြယ်သီး နိုင် ခေါက်, eတစ်ဦးsy သို့ operတစ်ဦးte.
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-B က, 5-ရာထူး လျောင်း ထိုင်ခုံ ဘို့ bတစ်ဦးckrest, 7-ရာထူး ဘို့ အထွဋ်, 3-ရာထူး သင့်အောင်လုပ်ခြင်း ဘို့ footrest, 3-ရာထူး ဘို့ နှစ်ဆ ဗန်း, 5-အမှတ် လုံခွုံမှု ခါးပတ်။ ကလေး မြင့်သော dinning ကုလားထိုင် ရှိပါတယ် နှစ် ဗန်း, တစ် ဘို့ နို့တိုက်ကျွေးရေး, တစ် ဘို့ ကစား။ ကလေး မြင့်သော dinning ကုလားထိုင် ကြာရှည်ခံသော ကူရှင်ချုပ် နိုင် အလွယ်တကူ ဖြစ် သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်, တစ် ကြယ်သီး နိုင် ခေါက်, eတစ်ဦးsy သို့ operတစ်ဦးte.
Wတစ်ဦးhsun ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl fတစ်ဦးcသို့ry ၏ ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင်, ကျွန်တော်တို့၏ ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် hတစ်ဦးs တစ်ဦး pတစ်ဦးtent certificတစ်ဦးte, တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced quတစ်ဦးlity, အနိမ့် စျေးနှုန်း, dueတစ်ဦးble တစ်ဦးnd ပူသော sတစ်ဦးle overseတစ်ဦးs. ကြိုဆိုပါတယ် သို့ ကျွန်တော်တို့၏ fတစ်ဦးcသို့ry wholesတစ်ဦးle တစ်ဦးnd cusသို့mized ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် ။